Quickie လေး ဘယ်လို ဆွဲရမလဲ 18+ – Gentleman Magazine
Quickie လေး ဘယ်လို ဆွဲရမလဲ 18+
15/01/2016 23/05/2017 Admin
Quickie လေး ဘယျလို ဆှဲရမလဲ
Quickie လေး ဘယ်လို ဆွဲရမလဲ
Quick တွေက မိုက်တယ်လို့ ထင်ပါသလား?? မိနိးကလေးတွေလဲ အဲဒါကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်မှပါ။ Quickie ကြိုက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ?? ဒီအောက်က ကိုးချက်ကတော့ သင့်ကို Quickie မှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် ကူညီပေးမှာပါ။
သင့်ပါတနာ အလုပ်မသွားခင် မနက်ကထဲက ညနေကျရင် လုပ်ငန်းစမယ့်အကြောင်းပြောထားပါ။ အဲဒါဆိုသူမဟာ တစ်နေ့လုံး သင့်အကြောင်းတွေးနေမိပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ရောက်ရင်တော့ သူမ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေအတွက် လိင်ကိစ္စဟာ ၅၀ ရာနှုန်း စိတ်ကိစ္စပါ။ အဲဒါကြောင့် သူမကို အသိပေးလိုက်ပါတော့။
သက်စွန့်ဆံဖျား ကြိုးစားခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမလိုလို ခံစားချက်လေးဟာ တကယ် စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ အကြာကြီး လုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့ နေရာကို သေချာ ပိတ်ထားဖို့ လိုပေမယ့် နည်းနည်းလေး အရဲစွန့်ကြည့်တာဟာ စိတ်ပိုပြီး လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တံခါးလေးကို စေ့ရုံပဲ စေ့ထားပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါ။
မိန်းမတွေဟာ လုံခြုံပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း နေရာလေးတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Bar က အိမ်သာတို့၊ ဈေးပေါပေါ ဟော်တယ်တို့ကို မေ့လိုက်ပါတော့။ Setting လဲ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
၄. Oral အရင်စပါ
လျှာဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို Quickie အစပျိုးပေးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ Clitoris ကို အဓိက ကစားပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး သူမကို မြန်မြန် ပြီးစေချင်ရင်တော့ အောက်ကို ဆင်းသွားပါ။ အပြင်နှုတ်ခမ်းတွေမှာ အချိန်ယူပြီး သင့်လျှာကို သူမ Clit ကို မထိတထိ ဆွပေးပါ။ ပြီးခါနီးပြီ ပြောရင်တော့ ဂရုစိုက်ပါ။
၅. ကောင်းဖို့အဓိကပါ။ ပြီးဖို့ အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။
အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပေးပါ။ သူမလဲ ထို့အတူ လိုက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နမ်းပါ။ ထိပါ။ အချိန်လေး ယူပေးပါ။
၆. Position ကို စဉ်းစားပါ
မိန်းမတွေမှာ Vagina က အရသာ ခံစားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Clitoris က ခံစားရတာပါ။ Clit ကို နှိုးဆွပေးဖို့အတွက် Cowgirl ပုံစံက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက Doggy လိုချင်ရင်တော့ သူမရဲ့ Clit လေးကိုပါ နှိုးဆွပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် သူမဘာသာ လုပ်ခိုင်းပါ။
၇. အဝတ်အစား ဝတ်လို့ရပါတယ်
ပုံမှန် လိင်ကိစ္စမှာ အဝတ်ချွတ်ဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် Quickie မှာက အဝတ်အစား မချွတ်လေ ကောင်းလေပါ။ သူမ စကတ်လေး မထားတာ မြင်ရတာ ပိုပြီး Sexy ကျနေတတ်ပါတယ်။
၈. အထောက်အကူပစ္စည်း ယူလာပါ
Quickie ဆိုလို့ ဘာမှ ယူလာလို့မရဘူး မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒါက အထူးတလည် ယူလာရတာ မဟုတ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Necktie နဲ့ လည်စည်း ပဝါတွေဟာ ပွတ်သပ်လှုံ့ဆွပေးလို့ ကောင်းပါတယ်။ ရေခဲတုံးလေးတွေနဲ့ ကြက်မွှေးကလဲ အဆင်ပြေတာပါပဲ။ မျက်လုံးစည်းထားတာဆို အရမ်း Sexy ကျပါတယ်။
၉. သူမကို အာရုံစိုက်ပါ
Quickie တွေမှာ ယောက်ျားက မိန်းမတွေထက် မြန်တတ်လို့ သူမကို ဂရုစိုက် ကြည့်ပေးပါ။ သူမ စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ပြီးသွားအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ မဟုတ်ရင် Quickie လုပ်ရတာ သူမအတွက် အဓိပ္ပါယ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမရဲ့ အသက်ရှုသံ၊ အမူအရာ၊ အားလုံးကို ဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။
အဲဒိ အကြံပေးချက်လေးတွေကို သုံးပြီး သင့်ကောင်မလေးကို Quickie ကောင်းကောင်း ခံစားမှုလေး ပေးလိုက်ပါ။ သူ့ကောင်မလေး ကောင်းမှာကို သူကောင်းမှာလောက် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးလောက် မိန်းကလေးတွေ သဘောကျတာ မရှိပါဘူး။
Quick တှကေ မိုကျတယျလို့ ထငျပါသလား?? မိနိးကလေးတှလေဲ အဲဒါကို ကွိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မှနျမှနျကနျကနျ လုပျမှပါ။ Quickie ကွိုကျသှားအောငျ ဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ?? ဒီအောကျက ကိုးခကျြကတော့ သငျ့ကို Quickie မှာ ဆရာတဈဆူဖွဈအောငျ ကူညီပေးမှာပါ။
သငျ့ပါတနာ အလုပျမသှားခငျ မနကျကထဲက ညနကေရြငျ လုပျငနျးစမယျ့အကွောငျးပွောထားပါ။ဘအဲဒါဆြိ သူမဟာ တဈနလေုံ့း သငျ့အကွောငျးတှေးနမေိပါလိမျ့မယျ။ အခြိနျရောကျရငျတော့ သူမ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိနျးမတှအေတှကျ လိငျကိစ်စဟာ ၅၀ ရာနှုနျး စိတျကိစ်စပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သူမကို အသိပေးလိုကျပါတော့။
သကျစှနျ့ဆံဖြား ကွိုးစားခိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မိမလိုလို ခံစားခကျြလေးဟာ တကယျ စိတျလှုပျရှားစပေါတယျ။ အကွာကွီး လုပျငနျးလုပျရငျတော့ နရောကို သခြော ပိတျထားဖို့ လိုပမေယျ့ နညျးနညျးလေး အရဲစှနျ့ကွညျ့တာဟာ စိတျပိုပွီး လှုပျရှားစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ တံခါးလေးကို စရေုံ့ပဲ စထေ့ားပွီး ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
မိနျးမတှဟော လုံခွုံပွီး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး နရောလေးတှကေို ကွိုကျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Bar က အိမျသာတို့၊ ဈေးပေါပေါ ဟျောတယျတို့ကို မလေို့ကျပါတော့။ Setting လဲ လိုအပျပါသေးတယျ။
၄. Oral အရငျစပါ
လြှာဆိုတာ မိနျးကလေးတဈယောကျကို Quickie အစပြိုးပေးဖို့ အသငျ့တျောဆုံးပါ။ Clitoris ကို အဓိက ကစားပေးရမှာ ဖွဈပွီး သူမကို မွနျမွနျ ပွီးစခေငျြရငျတော့ အောကျကို ဆငျးသှားပါ။ အပွငျနှုတျခမျးတှမှော အခြိနျယူပွီး သငျ့လြှာကို သူမ Clit ကို မထိတထိ ဆှပေးပါ။ ပွီးခါနီးပွီ ပွောရငျတော့ ဂရုစိုကျပါ။
၅. ကောငျးဖို့အဓိကပါ။ ပွီးဖို့ အဓိက မဟုတျပါဘူး။
အေးအေးဆေးဆေး စိတျငွိမျငွိမျထားပေးပါ။ သူမလဲ ထို့အတူ လိုကျလုပျပါလိမျ့မယျ။ နမျးပါ။ ထိပါ။ အခြိနျလေး ယူပေးပါ။
၆. Position ကို စဉျးစားပါ
မိနျးမတှမှော Vagina က အရသာ ခံစားရတာ မဟုတျပါဘူး။ Clitoris က ခံစားရတာပါ။ Clit ကို နှိုးဆှပေးဖို့အတှကျ Cowgirl ပုံစံက အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။ သူမက Doggy လိုခငျြရငျတော့ သူမရဲ့ Clit လေးကိုပါ နှိုးဆှပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ သူမဘာသာ လုပျခိုငျးပါ။
၇. အဝတျအစား ဝတျလို့ရပါတယျ
ပုံမှနျ လိငျကိစ်စမှာ အဝတျခြှတျဖို့ လိုအပျပမေယျ့ Quickie မှာက အဝတျအစား မခြှတျလေ ကောငျးလပေါ။ သူမ စကတျလေး မထားတာ မွငျရတာ ပိုပွီး Sexy ကနြတေတျပါတယျ။
၈. အထောကျအကူပစ်စညျး ယူလာပါ
Quickie ဆိုလို့ ဘာမှ ယူလာလို့မရဘူး မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒါက အထူးတလညျ ယူလာရတာ မဟုတျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ Necktie နဲ့ လညျစညျး ပဝါတှဟော ပှတျသပျလှုံ့ဆှပေးလို့ ကောငျးပါတယျ။ ရခေဲတုံးလေးတှနေဲ့ ကွကျမှေးကလဲ အဆငျပွတောပါပဲ။ မကျြလုံးစညျးထားတာဆို အရမျး Sexy ကပြါတယျ။
၉. သူမကို အာရုံစိုကျပါ
Quickie တှမှော ယောကျြားက မိနျးမတှထေကျ မွနျတတျလို့ သူမကို ဂရုစိုကျ ကွညျ့ပေးပါ။ သူမ စိတျလှုပျရှားအောငျ ပွီးသှားအောငျ ဂရုစိုကျပေးပါ။ မဟုတျရငျ Quickie လုပျရတာ သူမအတှကျ အဓိပ်ပါယျ ရှိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ သူမရဲ့ အသကျရှုသံ၊ အမူအရာ၊ အားလုံးကို ဂရုစိုကျကွညျ့ပါ။
အဲဒိ အကွံပေးခကျြလေးတှကေို သုံးပွီး သငျ့ကောငျမလေးကို Quickie ကောငျးကောငျး ခံစားမှုလေး ပေးလိုကျပါ။ သူ့ကောငျမလေး ကောငျးမှာကို သူကောငျးမှာလောကျ ဂရုစိုကျတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးလောကျ မိနျးကလေးတှေ သဘောကတြာ မရှိပါဘူး။
Previous: အချိန်ပြည့် စိတ်အားတက်ကြွနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
Next: MLM စနစ်က တကယ်ဝင်ငွေအမြောက်အမြားပေးနိုင်လား ?